Featured – Page3– BIG FM 101.2 MHz
यसो गरे कसो होला, सहारा ?
Rem Bk Featured, खेलकुद
महेश भण्डारी अबको २ दिनपछि खेलप्रेमीको ध्यान पोखरामा तानिन्छ । कारण, पोखरामा १६ औँ आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ । जिन्दगीमा मैले मेरो प्रोफेसन र प्यासनसँग नजोडिएको काम र ठाममा कुनै समय कँहीकतै विन्दास बिताएको छु भने त्यो आहा रारा कप हुँदै गर्दा एउटा फुर्सदिलो दर्शकको रुपमा पोखरा रंगशालामा नै हो । साहरा क्लब फाइनलमा पुग्दा काठमाडौँको विशेष काम …
रातीमा झलमल्ल बल्छन् गुर्जाको पहाडका ढुंगा !
बिग न्यूज पोखरा, ६ माघ । पहाडका ढुंगा पनि झलमल्ल बल्छ ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर म्याग्दीको बिकट मानिने गुर्जा गाउँ भन्दा पनि एक घण्टा पैदल हिँडेर पुग्नुपर्ने घुर्मखोलाअन्तर्गत पर्ने गुर्जा हिमालको फेदमा रहेका ढुंगाहरु रातीमा झलमल्ल बल्छन् । अलिक टाढाबाट हेर्दा यस्तो लाग्छ, पुरै पहाड नै झलमल्ल बलिरहेको छ । खासमा यसरी रातीमा झलमल्ल बल्ने ढुंगालाई ‘कार्ज’ …
बिग न्यूज पोखरा, ९ पुस । तमु ल्होछारको अवसरमा घान्द्रुकको ङग्युर दोर्जे साङाग छ्योंएलिङ गुम्बामा विशेष पुजापाठ हुने भएको छ । चरा वर्गको विदाई र कुकुर वर्गको आगमनको अवसरमा घान्द्रुक आठभाईघरस्थित गुम्बाको आयोजनामा पुजापाठ हुन लागेको हो । ल्होछारको अवसरमा हुने विशेष पुजापाठसँगै गुम्बामा ग्रहशान्ति, पितृपुजा तथा सामुहिक भोज समेत हुने गुम्बाका लामा अमृत गुरुङले जानकारी दिए । पुस ११ …
‘ह्याप्पी न्यू इयर’को साँगीतिक कार्यक्रममा ६ जना बडिगार्डसहित पुगे अभिनेता कुशल थापा
रेम बिक पोखरा, ७ पुस । ६ जना बडिगार्डसहित अभिनेता कुशल थापा स्टेजमा उक्लिँदा दर्शकदिर्घाबाट चर्को हुटिङ आयो । पोखरा सभागृहस्थित ‘मिडटाउन ग्यालरिया’को प्राङ्गणमा आयोजित नेपाली फिल्म ‘ह्याप्पी न्यू इयर’को प्रचारको क्रममा भएको साँगीतिक कार्यक्रममा उनी बडिगार्डसहित देखिएका हुन् । अनमोल केसी र प्रदिप खड्का पनि यसअगाडि यसैगरि बडिगार्डसहित फिल्मको कार्यक्रम तथा हल परिसरमा देखिएका थिए । पछिल्लो पटक अभिनेता …
बेरोजगार युवाको कथामा ‘मन त परदेशी’
बिग न्यूज पोखरा, ७ पुस । नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँका हजारौं युवाहरु दैनिक विदेशीन्छन् । नेपालमा पर्याप्त जागिर नहुँदा र सोचेजस्तो कमाउन नसक्दा परिवार र आफ्नो पेट पाल्नको लागि खाडी मुलुक जाने गरेको तितो यर्थाथ अझै विद्यामान छ । यही पीडा समावेश गरिएको फिल्म ‘मन त परदेशी’ यतिबेला प्रर्दशनको तयारीमा छ । पुस १४ गतेदेखि देशका ४० बढी …